. . . ndakawana murume wandaitsvaga chaiye ane rudo rwakanyanya
You are at:Home»Blogs»Tishamwaridzane». . . ndakawana murume wandaitsvaga chaiye ane rudo rwakanyanya
By Munyori weKwayedza on	 May 8, 2015 · Tishamwaridzane
INI ndinofara zvikuru ndakawana murume wandaitsvaga chaiye ane rudo rwakanyanya. Ndinotenda veKwayedza saka vose vachiri kufona pa0775 687 551 chiregedzai zvenyu.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37 ndinotsvagawo mudzimai wekugara naye ane makore 36 zvichidzika, ane mwana kana asina. Ndinobva kuDomboshava uye ndoda kunyanya vanoita zvekuhodha vachitengesa. Ndapota ndiri pachokwadi, nhare yangu 0775 936 005.
Ndiri mukadzi ane makore makumi matatu nemana nemwana mumwe chete ndodawo murume ari pachokwadi asina mukadzi anoshanda muHurumende. Ndinoda ari HIV positive, nhare yangu 0715 391 704.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinoda musikana ane makore 18 kusvika 25 anoshanda muHarare. Ari HIV negative anondibata pa0779 672 056.
Ndiri murume ane makore 41 ndinotsvagawo musikana mukobvu ane makore 22 kusvika 30 anoshanda wekushamwaridzana naye. Nhare yangu 0772 815 730.
Ndiri mukomana ane makore 21 ndinotsvagawo musikana wekufambidzana naye kusvika pakuroorana. Anondida ngaandibate pa0782 193 645.
Ndiri mukadzi ane mwana mumwe ndinotsvagawo murume akavimbika anoda zvemba akafirwa uye aine vana vaviri kana vatatu. Ari HIV positive anondibata pa 0782 501 449.
Ndiri mukomana ane makore 27, HIV negative uye ndinotsvagawo musikana ane makore 25-30 ari HIV negative. Anoda ngaandibate pa0778 374 934 asi ngaave wemuHarare.
Ini ndiri murume ane makore 37 ndinotsvagawo musikana ane makore 25-30 wekugara naye asina chirwere seniwo, akanaka uye ane hutsanana. Sms kana kufona pa0773 274 711.
Ini ndiri murume ane makore 49 nevana 5 ndiri kutsvakawo shamwarikadzi ine makore 35 kusvika 46 anoshanda semukoti kana rimwewo basa muHurumende. Ndiri murimi kuDarwendale, vanoda fonai pa0716 402 128.
Ndiri mukomana ane makore 23, HIV negative ndinozvishandira uye ndinotsvagawo musikana ane makore 18 anoda kuroorwa, akavimbika. Anoda ngaandiridzire nhare pa0774 962 820.
Ndiri mudzimai ane makore 34 nemwana 1, ndiri HIV positive uye ndinotsvaga murume wekuwadzana naye akatendeka ane rudo netsitsi aine makore 37 – 45. Andifarira ngaandibate pa0776 803 769. Ini ndinoita basa remawoko, murume uyu ngaave anoshandawo.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ane makore 18-20 ari pachokwadi, ane rudo uye ari HIV negative. Ngaatumire sms pa0777 731 003.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinodawo musikana ane makore 21 zvichidzika anoda kuroorwa akanaka. Ari pachokwadi nhare yangu 0775 772 872.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndoshanda uye ndinodawo musikana chero mukadzi ane mwana mumwe chete. Ngaave anotya Mwari aine makore 18-24. Nhare yangu 0715 169 428.
Ndiri mukomana asina wake, ndine makore 26 uye ndinotsvagawo musikana asinawo wake seni wekuroora ane makore 18-21. Ane mazirudo ari HIV negative ngaatumire sms pa0718 130 597.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinoda musikana ari pachokwadi ane makore 20 – 24. Anoda anofona kana kutumira sms pa0738 253 478.
Ndiri murume ane rudo ndotsvagawo mudzimai wekuwana ane makore 34 zvichidzika kusvika 27. Ini ndine makore 35 nevana vaviri. Ndinonamata, vanoda ndibatei pa0777 522 125 titaure.
Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana 3 ndinoda murume ane makore 35 kusvika 50 anoshanda ari HIV negative seni. Asina mukadzi ngaandibate pa0776 602 348.
Ndiri mukadzi ane vana 3 ndinoda murume ane rudo anoshanda uye asina chirwere ane makore 35 kusvika 50 asi ndapota vane vakadzi siyanai neni. Nhare yangu 0776 602 348.
Makadii veKwayedza? Ndiri mhetamakumbo ine makore 45 uye ndiri HIV positive. Ndinotsvagawo shamwarikadzi iri HIV positive ine makore 35 zvichikwira. Anoda ngaandibate paWhatsApp pa0772 586 160.
Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana 2 ndinotsvaga murume anondiroora. Anoda ngaandibate pa0713 670 253.
Ndinotsvagawo musikana ane makore 22 zvichidzika, anogeza asingarware uye anoda zvekumusha. Ndogara kwaChihota, nhamba yangu 0776 609 509 asi call me back kwete.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 nevana vaviri, handirwari uye ndinotsvagawo mudzimai ane mwana kana asina ane makore 28 kusvika 32. Ndibatei pa0777 522 125.
Ndiri murume ane makore 50, HIV positive uye ndinotsvagawo mukadzi mudzidzisi, murairidzi kana kuri chero akadzidza. Ndibatei pa0733 797 842.
Ndakambonyorera asi ndongowana matsotsi chete. Ndiri murume ane makore 31 ndotsvagawo mukadzi ane makore 19-25. Nhare yangu 0716 533 471.
Ndinodawo murume asina mukadzi, anoshanda uye akangezeka asi ngaave asingade vana ane makore 39 – 40. Ari pachokwadi ngaandibate pa0777 828 141.
Makad­iiko? Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana mumwe, Ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 31 kusvika 35 ari pachokwadi. Anonamata ngaandibate pa0738 672 624.
Ndiri mudzimai ane makore 37 nevana 3 ndinotsvaga murume wokuroorana naye ane vana vakewo. Ngaave ane makore 39 zvichienda mberi, nhare yangu 0775 098 820.
Ndiri mukadzi ane makore 30 nevana 3, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ari positive ane makore 35 – 40. Nhare yangu 0773 803 052.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32 ndotsvakawo mukadzi ane makore 27 kusvika 32 mukobvu. Vanoda ndibatei pa0776 430 528.
Ndiri murume ane makore 31 ekuberekwa nemwana 1, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 31 zvichidzika wekuroora. Nhamba yangu 0772 515 270.
Ndishambadzeiwo, ndakambonyorera asi handina kuwana wandaida. Ndiri mukomana ane makore 26 ndiri HIV+, ndiri mupfupi pachimiro uye ndinotsvaga musikana kana mukadzi ane makore 21 zvichikwira ari positive. Ndinoda anoshanda ndapota, andifarira anondibata pa0772 761 114.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndotsvagawo musikana anoda zvemba ari pachokwadi. Ndiri HIV negative, fonai pa0734 860 254.
Ndiri murume ane makore 34, ndakarwadziswa mwoyo wangu uye ndinodawo mukadzi ane makore 20 kusvika 30. Handinwe doro, handina mwana uye ndinopinda chechi yeAFM. Ndiri mucross-border, HIV negative, nhamba yangu 0772 948 172.
Ndine makore 33 ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 25-29 ane mari. Ini handishande ndoda ari pachokwadi uye vanoda kutamba kwete. Nhamba yangu 0735 036 916, call me back kwete asi sms ndopindura.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 30 ndinotsvaga mudzimai kana ane mwana mumwe chete anoda zvemusha. Nhamba yangu 0718 155 958.
Ndiri murume ane makore 31 nemwana mumwe uye ndotsvakawo mudzimai ane makore 21-26. Tumirai sms pa0779 219 097.
Makadii vehamawe-e? Ndiri kutsvagawo musikana ari pachokwadi anogara muHarare ane chero makore asi ari pachokwadi. Nhare yangu 0783 712 673.
Ndinodawo mukadzi anoda zvemba ane makore 20 – 28 mutsvuku kana mushava ane mwana 1 kana asina. Ini ndine vana 2. Asina chirwere ngaandibate pa0714 754 685.
Ndiri murume ane makore 30 ndakasiyana nemukadzi, ndiri kutsvagawo anoda zvemba. Ndibatei pa0716 874 426.
Ndiri mukadzi ane makore 48 ndinoda murume wekuroorana naye ane makore 49 zvichienda mberi.
Ngaave anoshanda akazvipira kunoongororwa ropa. Ini ndinogara ndega ndinoita mabasa emawoko. Anondida anondibata pa0733 859 362 asi call me back kwete.
Ndiri murume ane makore 34 ndinotsvagawo musikana anoda zvekuroorwa ari pachokwadi ane makore 18 kusvika 29. Ndibatei pa0733 493 340.